Soo dejisan Yaware.TimeTracker 1.4.12.387 – Vessoft
Soo dejisan Yaware.TimeTracker
Yaware.TimeTracker – software ah si ay ula socdaan falalka shaqaalaha at computer ah inta ay socoto shaqada. software The lafaguraa iyo bandhigayaa tirada isticmaalka wax soo saar ama xumeyn waqtiga shaqaalaha ah. Yaware.TimeTracker hayaa diiwaanka waqtiga shaqada user ee la software ah, websites iyo waraaqaha. software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u aragto warbixin saacadaha la shaqeeyay iyo qiimeeyo waxqabadka iyo hufnaanta shaqaalaha. Yaware.TimeTracker waa qumman yahay si loo hagaajiyo tayada shaqo ee fiirsashada, qoondaynta waqti iyo waxqabadka shaqaalaha.
Assessment of culayska shaqaalaha
Accounting khayraadka loo isticmaalo
Sixidda oo ka mid ah xadgudubyada edbinta shaqada
Screenshots la soo noqnoqoshada cayiman
Yaware.TimeTracker Software la xiriira:
Hogaamiyaha adduunka ee design cajaladda iyo sawirka dhinacyo kala duwan. Software ayaa ku siinayaan shaqada mashaariicda 2D iyo 3D.
Fonctionnel outil L'shub augmenter le nombre des visiteurs du web site. Le logiciel est faa`iidaysiga comme l'de adeeg W suuq codsiga ku shub commercer les Kahor Sur l'internet.
software waxaa loogu talagalay si ay u bixiyaan helitaanka superuser in mid ka mid ah hawlaha qalabka Android iyo goobaha aan la xadidayn ah soo saaraha ah.